Nezvedu - Nanchang Vision Garment Co, Ltd.
Nanchang Vision Garment Co, Ltd. iri muguta reNanchang, mudunhu reJiangxi, China. Nanchang inozivikanwa nemazuvano ekuruka machira kumba nekune dzimwe nyika, vachipihwa zvakateerana kupihwa 'Chinese Inozivikanwa Knitwear Guta', 'National Textile Apparel Creative Dhizaina Pilot Park', 'Provincial Pilot Unit Yekuvandudza uye Kuvandudza Maindasitiri Emagariro' uye mazita anoverengeka ekuremekedza .
Tine yedu pachedu fekitori uye yekudhinda fekitori, iine makore angangoita gumi ezviitiko kubatsira vatengi vedu neyakajairika nguvo yavo yezvinodiwa, kupa tsika machira, tsika logo digitizing, kupisa kuchinjisa kudhinda, sublimation uye sirika yekudhinda skrini.
Isu takasarudzika mune dzakarukwa mbatya senge t shirt, polo shati, hoody, tank yepamusoro, pant ect., Uyezve isu tinopa zvipfeko zvekushongedza zvakaita seheti, bhegi nemenduru, masokisi ezvipo, kukwidziridzwa uye zviitiko zvekunze zvekunze. Hunhu itsika yedu, zvakare ndiyo yedu yekutanga. Isu tinogara tichishingirira musimboti we "Mutengi Chekutanga, Hunhu hwekutanga". Kambani yedu ine nyanzvi QC timu yekuona zvigadzirwa zvedu nemhando yepamusoro isati yatumirwa uye yekugadzira tambo inogona kugadzira mhando yakanaka munguva pfupi. Zvakare isu tine dhizaini timu yenyanzvi, inogona kubatsira iwe kudhirowa mhedzisiro pikicha sekufunga kwako. Iwe unongoda kupa pachena mauropi ako, isu tiri pano kuti tizadzise izvo.
Iwe unoda here kupfeka zvakasarudzika nguvo nepfungwa yako? Iwe unoda kugadzira yako yega brand chipfeko? Iwe unoda kuve wakasarudzika uye mutsva? Kana zvirizvo, unogona kudzvanya pazasi kurudyi nzvimbo kuti utore! Welcome to Website yedu.